Andininy Rachel McPherson momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Rachel McPherson
Miasa amin'ny maha filoha lefitry ny serasera i Rachel amin'izao fotoana izao Collab miasa. Taorian'ny nahavitany ny mari-pahaizana mavesatra tamin'ny serasera dia nanohy ny asany tamin'ny sehatry ny niomerika izy, indrindra teo amin'ny sehatry ny varotra sy ny fifandraisana amin'ny daholobe.
Mitarika ekipa marketing nomerika - ny fanamby sy ny fomba hihaonana amin'izy ireo
Alarobia, Desambra 28, 2016 Alarobia, Desambra 28, 2016 Rachel McPherson
Amin'ny teknolojia miova ankehitriny, ny fitarihana ekipa marketing nomerika mahomby dia mety ho fanamby. Miatrika ny filàna teknolojia mahomby sy marobe ianao, fahaiza-manao marina, fizotry ny varotra azo atao, ankoatry ny fanamby hafa. Mihabe ny fanamby rehefa mitombo ny orinasa. Ny fomba fikirakiranao ireo olana ireo dia mamaritra raha toa ka hiafara amin'ny ekipa mahomby izay afaka mahafeno ny tanjon'ny varotra an-tserasera amin'ny orinasanao ianao. Ekipa Marketing Marketing Digital ary ny fomba hihaonana amin'izy ireo amin'ny fampiasana teti-bola ampy